Javier Reverte: akwụkwọ aga ụwa, na -arụ ọrụ ibi | Akwụkwọ ugbu a
Juan Ortiz | 07/09/2021 00:37 | Akụkọ ndụ, Ndị edemede, Akwụkwọ
Odida obodo Afrika
Mgbe ị na -ajụ ajụjụ gbasara weebụ gbasara "akwụkwọ Javier Reverte", nsonaazụ ya na -atụgharị gaa na Trilogy nke Africa. Saga a bụ otu n'ime ọrụ ndị Spanish kacha mara amara; n'ime ya ọ na -egosi anyị ọhụụ ya na kọntinent a siri ike. Reverte bụ onye njem na -anụ ọkụ n'obi ma na -achọ ịmata onye maara ka esi eji ezigbo pen wee were ọtụtụ blọọgụ ya gburugburu ụwa.
Ka ọ na -eme njem site na ebe ndị mara mma, o dere nkọwa ziri ezi banyere odida obodo na ndị ọ maara. N'ime ndetu ndị a, o gosipụtara mmetụta na echiche nke ọ bụla, nke o mechara gbakwunye na akụkọ ihe mere eme. Akụkọ ya bara ụba nyere ya ohere inweta ọtụtụ narị puku ndị na -agụ akwụkwọ na -enwe ekele maka inwe ike ime njem oge ọ bụla ha gara akwụkwọ ya..
1 Akwụkwọ kacha mma nke Javier Reverte dere
1.1 Nrọ Afrịka (1996)
1.2 Obi Ulysses (1999)
1.3 Osimiri nke ịtọgbọrọ n'efu. Njem site na Amazon (2004)
1.4 Oge nke ndị dike (2013)
2.2 Onu ahia
2.4 Ọrụ Javier Reverte na -arụ
2.4.1 Akwụkwọ njem
Akwụkwọ kacha mma nke Javier Reverte dere
Nrọ nke Africa (1996)
Ọ bụ akwụkwọ njem ebe onye dere kọwara njem ya na East Africa wee bido saga Trilogy nke Africa. Usoro njem okirikiri ahụ na-amalite na Kampala (Uganda), na-aga n'ihu na Dar es Salaam (Tanzania) wee kwụsị na Kenya. Ọrụ ahụ na -egosi ọtụtụ akụkọ mpaghara ahụ, ọchịchị ndị Europe chịrị ya na ọdịda nke ọchịchị ndị eze Africa.
Ihe Javier Reverte kwuru
Reverte na -akọ nke ọma njem ya site na mpaghara anwansi jupụtara na ndụ, yana nuances na -enwe ọ joyụ na obi ụtọ. Ọzọkwa, onye edemede na -ekpughe njikọ nke ọbụbụenyi nke ya na ụmụ amaala dị iche iche ọ na -ekerịta. Na mgbakwunye, n'etiti ahịrị ọ na -ezo aka na ụfọdụ ndị ode akwụkwọ gara leta ma dee gbasara kọntinent ahụ, n'etiti ha bụ: Hemingway, Haggard na Rice Burroughs.
Nrọ nke Africa ...
Obi Ulysses (1999)
N'oge a, ndị Spain na -aga njem n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Mediterenian na kọwara ọbịbịa ya na mba atọ: Gris, Turkey na Egypt. Reverte na -enye gị ohere ịhụ mmetụta dị iche iche kpatara site n'ịgafe ọtụtụ omenala, ọdịnala na akwụkwọ. N'oge mmepe ya, akọwapụtara ụfọdụ ebe nke mba atọ a, akụkọ a na -ejikwa akụkọ ifo banyere akụkọ ifo Greek na ihe ndị ọzọ mere eme dị mkpa.
Mgbe mmepe nke ederede na -aga n'ihu ụfọdụ ndị mmadụ - ezigbo na akụkọ ifo - onye nnọchi anya oge ochie gụnyere. Ndị a gụnyere: Homer, Ulysses, Helen nke Troy na Alexander Onye Ukwu. N'ime njem ahụ, Reverte na -ekwusi ike ebe dị mkpa, dịka ụsọ mmiri Turkey, Peloponnese, Rhodes, Ithaca, Pergamum, Kọrịnt, Athens, Kastellorizon Island, na Alexandria.
Obi Ulysses (kacha mma ...
Osimiri nke ịtọgbọrọ n'efu. Njem site na Amazon (2004)
N'oge emume a, onye njem ahụ na -emikpu onwe ya n'ike nke na -etinye ike, jupụtara na akụkọ mgbe ochie na ihe egwuregwu: Amazon. Ka ọ na -abanye na mmiri Amazon, reverte na -akọ akụkọ iberibe akụkọ ụmụ amaala. Njem ahụ malitere na June 2002 n'obodo Arequipa, nke dị na ndịda Peru. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ iru ebe amụrụ nnukwu ụdịrị: Nevado del Mismi.
N'akụkụ, na mgbakwunye ịmara ụfọdụ obodo na obodo, Reverte na -esokwa ndị bi n'akụkụ mmiri iyi akụkọ ifo. Ụzọ ahụ nyere ikike ịbanye n'ụgbọ ndị njem, ụgbọ mmiri na ọbụna ụgbọ elu ugboro abụọ. N'agbanyeghị na ọ na -arịa ọrịa ịba, onye ode akwụkwọ jisiri ike gbakee ma mezue njem ya na Atlantic Brazil.
Osimiri nke ...
Oge ndị dike (2013)
Ọ bụ akụkọ gbasara ndụ General Juan Modesto, onye jere ozi dị ka onye ndu ndị agha Kọmunist na agha obodo Spanish. Akụkọ a bidoro na Machị 1939, n'oge ikpeazụ nke ọgụ ọgụ. Ndị Republican na -akwado ịpụ ike na ndị Francoist na -aga n'ihu site na mmeri ọhụrụ. N'oge ahụ, Modesto - yana ndị ọrụ agha ndị ọzọ - haziri ọpụpụ gọọmentị.
Akụkọ a na -akọwa akụkụ nke ndụ onye ọchịagha, dị ka ncheta oge ọ bụ nwata na obere iberibe ndụ ịhụnanya ya. Ka ọ dị ugbu a, a na -agụkwa agha ndị ọ lụrụ na ka ndị agha siri merie egwu ha. Iguzosi ike n'ihe na mkpakọrịta, jupụtakwara ndị agha ahụ ka ha merie oge kacha sie ike.
Oge ndị dike ...
Javier Martínez Reverte A mụrụ ya na Fraịde, Julaị 14, 1944 na Madrid. Ndị mụrụ ya bụ: Josefina Reverte Ferro na onye nta akụkọ Jesús Martínez Tessier. Site na mgbe ọ bụ nwata ọ dọtara mmasị na ọrụ nna ya, ihe enwere ike ịhụ na agụụ ide ihe ya. Ọ bụghị n'efu kpebiri ịchụso mahadum na Philosophy na Journalism.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, Ọ rụrụ ọrụ ihe karịrị afọ iri atọ dị ka onye nta akụkọ na mgbasa ozi Spanish dị iche iche. N'ime ahụmịhe ọrụ ya, afọ 8 ya (1971-1978) dị ka onye nta akụkọ na obodo dịka London, Paris na Lisbon pụtara ìhè. N'ime oge ọrụ ya ọ rụkwara ọrụ na ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ ya, dịka: onye ntaakụkọ, onye na-ede akụkọ gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye na-ede akwụkwọ akụkọ, na onye isi nchịkọta akụkọ.
Nzọụkwụ mbụ ya dị ka onye edemede bụ site na edemede maka mmemme redio na telivishọn. Na mbido afọ 70, o lekwasịrị anya na agụụ abụọ ya: akwụkwọ na njem.. Na 1973, o ji edemede wee banye n'ọgbọ egwuregwu The njem nke Ulysses, rụọ ọrụ ebe o weghaara ụfọdụ ahụmịhe ya dị ka globetrotter.
Na 80 'ọ banyere n'ime ụdị ndị ọzọ: akụkọ na uri. Ọ malitere site n'akwụkwọ nke akwụkwọ akụkọ: Ụbọchị na-abịa-ikpeazụ (1981) na Ọnwụ a na -atụghị anya ya (1982), na mgbe e mesịrị nchịkọta abụ Obodo ukwu (1982). Ọ gara n'ihu na akwụkwọ njem yana na 1986 o gosipụtara saga mbụ ya: Trilogy nke Central America. Ihe mejupụtara nke a bụ akwụkwọ akụkọ atọ nke ọ kọwara afọ siri ike nke mpaghara ahụ n'oge ahụ.
Reverte wuru Pọtụfoliyo ederede sara mbara na enweghị atụ, yana ngụkọta ederede 24 sitere na njem ya gburugburu ụwa, akwụkwọ akụkọ 13, abụ 4 na obere akụkọ. Otu n'ime ọrụ ya ndị kacha pụta bụ: Nrọ nke Africa (1996, Africa Trilogy), Obi Ulysses (1999), Ụzọ nkwụsị (2005), Osimiri nke ìhè. Njem site na Alaska na Canada (2009) na ọrụ ya mgbe ọ nwụsịrị: Nwoke na mmiri (2021).
N'oge ọrụ ide ihe ya e nyere ya ugboro atọ. Nke mbụ, n'ime 1992 na ihe nrite akwụkwọ akụkọ Madrid maka Onye agha. Ekem ke 2001 natara akwụkwọ akụkọ Ciudad de Torrevieja maka Abalị kwụsịrị (2000). Nkwado ikpeazụ ya batara 2010, ya na Fernando Lara de Novela maka Mpaghara efu.
Javier Reverte ọ nwụrụ n'obodo ya, na Ọktoba 31, 2020. Nke a, ngwaahịa nke na -arịa ọrịa kansa.
Ọrụ Javier Reverte na -arụ
The njem nke Ulysses (1973)
Trilogy nke Central America:
Chi na mmiri ozuzo. Nicaragua (1986)
Isi nke Copal. Guatemala (1989)
Onye agha. Honduras (1992)
Nabata na hel. Daysbọchị Sarajevo (1994)
Trilogy nke Africa
Vagabond na Afrịka (1998)
Ụzọ ndị furu efu nke Africa (2002)
Obi Ulysses. Gris, Turkey na Egypt (1999)
Tiketi otu ụzọ (2000)
Anya mmetụta (2003)
The njem nke njem (2006)
Egwu Mbama (2007)
Osimiri nke ìhè. Njem site na Alaska na Canada (2009)
N'ime oke osimiri. Njem na Arctic (2011)
Ugwu nta na -ere ọkụ, ọdọ ọkụ (2012)
Okirikiri ala nke ụwa (2013)
Bụọ Ireland (2014)
Oge mgbụsị akwụkwọ roman (2014)
Oge ọkọchị China (2015)
Suite Ịtali (2020)
Ụbọchị na-abịa-ikpeazụ (1981)
Ọnwụ a na -atụghị anya ya (1982)
Ubi Strawberry ruo mgbe ebighị ebi (1986)
Nwanyị nke abis (1988)
Nrọ niile dị n'ụwa (1999)
Abalị kwụsịrị (2000)
Dọkịta Ifni (2005)
Ka alaeze gị bịa (2008)
Onye nwe Paco (1985)
Zero agbata obi (2010)
Oge nke ndị dike (2013)
Ọkọlọtọ na igwe (2017)
Nwoke nọ n'elu mmiri (2021)
Obodo ukwu (1982)
Ugwu mgbawa ahụ merụrụ ahụ (1985)
Ụzọ nkwụsị (2005)
Egwu Afrịka (2011)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Javier Reverte: Akwụkwọ